အမှတ်တရလေးများ: စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးဆွမ်းလောင်းအသင်း(၃နှစ်ပြည့်) အလှူပွဲ။
မေတ္တာရှင်ဖောင်ဒေးရှင်း၊စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးဆွမ်းလောင်းအသင်း (၃)နှစ်ပြည့် ဆွမ်းလောင်းလှူပွဲကို ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့တွင် စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး သဒ္ဓမ္မပါလကျောင်းတိုက်တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး သံဃာတော်အပါး ၁၀၀၀ ကျော်အား နတ်သုဒ္ဓါဒံပေါက်ဆွမ်းများ လောင်းလှူနိုင်ရန်အတွက် အောက်ပါ အလှူရှင်များမှ ဆက်သွယ် လှူဒါန်းခဲ့ကြပါသည်။ဆွမ်းလောင်းလှူပွဲသို့ လိုက်ပါကုသိုလ်ယူလိုသူ အလှူရှင်များအနေနှင့် ကျွန်မ၏ဖုန်းနံပါတ် (၀၉ ၇၃၀၉၅၈၅၁)သို့ ဆက်သွယ် နိုင်ကြပါတယ်ရှင်။ကိုအောင်ဝင်းထွဋ်+မတင်တင်ခိုင်၊သား-မောင်ကျော်ဇင်ထွဋ် မိသားစု(စင်္ကာပူ)မှ မောင်ကျော်ဇင်ထွဋ် ၏မွေးနေ့အလှူအဖြစ် သံဃာအပါး ၅၀၀ ကျော်နှင့် ဧည့်ပရိဿတ်များအား အရုဏ်ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းရန်အတွက် အလှူငွေ (၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်) + သံဃာအပါး(၁၀၀)နတ်သုဒ္ဓါ ဒံပေါက်ဆွမ်းဆက်ကပ်ရန်အတွက် အလှူငွေ (၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်)မခင်ငြိမ်းချမ်းဦး (မလေးရှား)မှ သံဃာတော်များအား အမွှေးဆပ်ပြာခဲလှူရန် အလှူငွေ ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ် လက်ခံရရှိပါသည်။ဦးဇင်းဦးကောဝိဒ လက်ခံရရှိသော အလှူငွေ- (၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်)၁.ကိုမောင်သက်+မဝေေ၀စိုးမိသားစု(မူဆယ်)မှ သံဃာ(၁၀၀ပါး)အတွက် (၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်) မတင်ဇာပိုင်(စင်္ကာပူ)လက်ခံရရှိသောအလှူငွေ- (၆၃၂,၄၀၀ ကျပ်)1. ကိုဇော်ဇော် နှင့် ညီမ ခေတ်ရတနာ (စင်္ကာပူ) S$ 502. ကိုမျိုးသန့်စိုး+မအေးသန္တာဖြိုး (စင်္ကာပူ) S$ 313. ကိုဇော်မင်းပိုင်+မရည်မွန်ကျော်မင်း(စင်္ကာပူ) S$ 354. ကိုအောင်သန့်နိုင် + မခိုင်ခိုင်ဝင်း သား | မောင်မင်းသုတ မိသားစု (စင်္ကာပူ) S$ 129.235. မအေးမွန်သန့် (စင်္ကာပူ) S$ 166. မမြသဲဖြူ + မလဲ့လဲ့ခိုင်(စင်္ကာပူ) S$ 227. ကိုအောင်ပြည့်စုံအေး(စင်္ကာပူ) S$ 15.58. ကိုဥာဏ်ဝင်းထွန်း+မအေးသန္တာထွန်း (စင်္ကာပူ) S$ 359. မိဘများကို အမှူးထား၍ မအိသန္တာချို (စင်္ကာပူ) S$ 3510. ကိုထွန်းထွန်း (စင်္ကာပူ) S$ 4711. ဦးသိန်းဌေး+ဒေါ်ရူတင် မိသားစု (စင်္ကာပူ) S$ 1612. ကိုခင်မောင်ဦး+ မသန္တာလွင် (စကာင်္ပူ ) S$ 1613. ဦးစံမာ+ဒေါ်ဒေါင်း သမီးမ၀င်းဝင်းမြင့် (စကာင်္ပူ) S$ 1614. ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ကြီး ဦးမောင်မောင်အေး အား ရည်စူး၍ ကိုစိုးဝင်းနောင် နှင့် မသန္တာလှိုင် (စကာင်္ပူ) S$ 1615. မအေးဇာနွယ် (စကာင်္ပူ) S$ 1616. အဘ ဘိုးဏီ ကိုဌေးအောင် (ဒိန်းမတ်) S$ 10017. ကိုကျော်ဇင်ဦး+မဝေဝေနိုင် (စင်္ကာပူ) S$ 3118. ဦးမြစိန်+ဒေါ်တင်မေ မိသားစု (အင်းစိန်မြို့) S$ 9519. မသက်မာ (စင်္ကာပူ) S$ 30.320. ကိုသန့်ဇင်+မခင်ချောစု၊သား-မောင်လင်းသန့်မိသားစု (စင်္ကာပူ) S$ 3121. ကိုမြတ်ထွန်းမျိုး+မအိအိချို (စင်္ကာပူ) S$ 3122. ကိုကျော်သူရ (စင်္ကာပူ) S$ 10023.မယဉ်ယဉ်ပြုံး(စင်္ကာပူ) ၁၀၂၀၀ ကျပ်TOTAL : S$ 914.03 + ၁၀၂၀၀ ကျပ်မတင်ဇာပိုင်(စင်္ကာပူ)ထံမှ လက်ခံရရှိငွေ စုစုပေါင်း = ၆၂၂,၂၀၀ ကျပ် + ၁၀,၂၀၀ ကျပ်=(၆၃၂,၄၀၀ ကျပ်)----------------------------------မ၀ါဝါခိုင်မင်း ထံသို့ ဆက်သွယ်ထားကြသော အလှူရှင်များစာရင်း-( ၈၅၂,၀၀၀ ကျပ်)၁.မခင်ငြိမ်းချမ်းဦး(မလေးရှား)မှ သံဃာ (၅၀ ပါး) အတွက် (၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်))(လက်ခံရရှိပြီး) (WWKM)၂.ဦးတင်ထူး+ဒေါ်စန်းစန်းဦး၊သား-မောင်မျိုးခင်၊မောင်ဝေဖြိုး မိသားစု(စင်္ကာပူ)မှ ဇွန်၁၈ရက် ဦးတင်ထူး၏မွေးနေ့အလှူ သံဃာ (၅၇ ပါး) အတွက် (၁၂၀,၀၀၀ ကျပ်)(လက်ခံရရှိပြီး)(WWKM)၃.မခင်ဖြူစင်(စင်္ကာပူ) သံဃာ (၂၅ ပါး) အတွက် (၅၀,၀၀၀ ကျပ်) (လက်ခံရရှိပြီး)(WWKM)၄.မိဘများကို အမှူးထား၍ မမူမူမောင်(ဒူဘိုင်း)မှ သံဃာ (၁၅ ပါး) အတွက် (၃၀,၀၀၀ ကျပ်)(လက်ခံရရှိပြီး) (WWKM)၅.Dr.မြတ်ဥာဏ်+ဒေါ်ဝါ၀ါခိုင်မင်း ၊သမီးလေး မေမြတ်နိုးခိုင်၏(၁၁နှစ်ပြည့်)မွေးနေ့အလှူ။ သံဃာ(၁၁ ပါး) အတွက် (၂၂,၀၀၀ ကျပ်))(လက်ခံရရှိပြီး) (WWKM)၆.ဦးတင်မောင်သိန်း+ဒေါ်ခင်ခင်မူ၊သမီး-ဆွေလဲ့မူ(Abudhabi,UAE) မိသားစု မှ သံဃာ(၁၀ ပါး) အတွက် (၂၀,၀၀၀ ကျပ်) (လက်ခံရရှိပြီး) (WWKM)၇.နှစ်ဖက်သောမိဘများကို အမှူးထား၍ Dr.သိန်းထွန်းနိုင်+Dr.ရတနာမြင့်ဦးမိသားစု(ထိုင်ဝမ်) မှ သံဃာ(၅၀ ပါး) အတွက် (၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်)(လက်ခံရရှိပြီး) (WWKM)၈.ကိုရဲထွဋ်+မဧဧသန့် မိသားစု(စင်္ကာပူ) သံဃာ(၅ ပါး) အတွက် (၁၀,၀၀၀ ကျပ်)(လက်ခံရရှိပြီး)(WWKM)၉.မသီတာဝင်း မိသားစု (စင်္ကာပူ) သံဃာ(၅ ပါး) အတွက် (၁၀,၀၀၀ ကျပ်)(လက်ခံရရှိပြီး)(WWKM)၁၀.Dr.အောင်မွန်+Dr.၀ါဝါဦး(အင်္ဂလန်)မှ သံဃာ (၅၀ပါး) အတွက် အလှူငွေ (၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်))(လက်ခံရရှိပြီး)(WWKM)၁၁.ကွယ်လွန်သူဖခင်ဦးကံသိမ်းအားရည်စူး၍ ဒေါ်ချိုချိုဝင်း နှင့် သား၊သမီးများ၏အလှူ။ (သံဃာ(၅ ပါး) အတွက် (၁၀,၀၀၀ ကျပ်))(လက်ခံရရှိပြီး)(WWKM)၁၂.Dr.မျိုးမင်းသန့်+ဒေါ်မေယမင်းသူ Bright Team Decoration Co.,Ltd (YGN) မှ သံဃာ(၅ ပါး) အတွက် (၁၀,၀၀၀ ကျပ်)၁၃.Dr.ဦးတိုးဝေ+Dr.ဒေါ်ခင်ဆွေတင့် မိသားစု(ရန်ကုန်)မှ သံဃာ(၅၀ပါး)အတွက် (၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်)၁၄.ကိုအောင်ရဲပိုင် (ရန်ကုန်)မှ သံဃာ(၅၀ပါး) အတွက် (၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်)၁၅.ဦးဝင်းမြင့်+ဒေါ်ခင်စု မိသားစု(ရန်ကုန်)မှ သံဃာ( ၅ပါး) အတွက် (၁၀,၀၀၀ ကျပ်) ၁၆.ဦးခင်ညွန့်+ဒေါ်ခင်ဆွေရီ မိသားစု(ရန်ကုန်)မှ သံဃာ(၅ပါး) အတွက် (၁၀,၀၀၀ ကျပ်)၁၇.ဦးခိုင်မြင့်+ဒေါ်မြမိုးစံမိသားစု(ရန်ကုန်)မှ သံဃာ (၅ပါး)အတွက် (၁၀,၀၀၀ ကျပ်)၁၈.ဦးအောင်ဝင်း+ဒေါ်ခင်ဆွေကြည်မိသားစု(ရန်ကုန်)မှ သံဃာ( ၅ပါး) အတွက် (၁၀,၀၀၀ ကျပ်) ၁၉.ကိုသက်နိုင်ဦး+Dr.နှင်းဝတ်ကြည်၊သား-မင်းသစ်ထွန်း မိသားစု(ထိုင်ဝမ်) မှ သံဃာ(၁၅ပါး)အတွက်(၃၀,၀၀၀ ကျပ်) (လက်ခံရရှိပြီး)(WWKM)-----------------------------------------------------------------------------------(၂.၇.၂၀၁၂)အထိ ဒေါ်ဝါ၀ါခိုင်မင်း လက်ခံရရှိထားသောအလှူငွေ = ၈၅၂,၀၀၀ ကျပ်------------------------------------------------------------------------------------သံဃာတော်တစ်ပါးလျှင် န၀ကမ္မအလှူငွေ (၁၀၀၀ကျပ်) လှူဒါန်းနိုင်ရန်အတွက် အောက်ပါ အလှူရှင်များမှ ဆက်သွယ် လှူဒါန်းထားကြပါသည်။ ၁.ကိုဇော်ဝင်းထွဋ်+မနှင်းယုယုဝင်း၊သမီးလေး-အေးချမ်းပွင့်ဖြူ မိသားစု(စင်္ကာပူ)မှ မအေးချမ်းပွင့်ဖြူ ၏ မွေးနေ့အလှူအဖြစ် သံဃာတော်(၁၂ပါး)အတွက် အလှူငွေ (၁၂,၀၀၀ ကျပ်)၂.ကိုမင်းသူရိန်+မသဇင်၊သားသား- မင်းသန့်ကျော်(Ahboy)(စင်္ကာပူ)မှ သံဃာတော် (၁၀ပါး)အတွက် အလှူငွေ (၁၀,၀၀၀ ကျပ်)'
Number of View: 422 ဆက်စပ်ပို့စ်များ ။ မြသွေးနီရဲ့သူငယ်ချင်းအိုင်ရင်း အိုင်ရင်းရေးသောစာများ (၁) ဆန္ဒနဲ့ဘ၀တစ်ထပ်ထဲကျကြပါစေ။